लयमा फर्केको युरोकप २०२० ‘सफल र सुरक्षित’ | Naya News Nepal
Home खेलकुद लयमा फर्केको युरोकप २०२० ‘सफल र सुरक्षित’
२३ जेष्ठ २०७८, आईतवार ०९:२०
युरो कप २०२० अर्को साता सुरु हुनेछ, अर्थात १२ जुन बाट सुरु हुनेछ । पहिलो खेलमा टर्की र अटाली आमनेसामने हुने छ । १२ जुन बाट सुरु भएको खेल १२ जुलाई मा फाइनल कल हुनेछ । विवाद, पछाडि सारिएको स्थिति र नयाँ चुनौतीबीच पनि युरोपेली फुटबलको सर्वोच्च प्रतियोगिता सफल हुने विश्वास छ ।
गत वर्ष २०२० मार्च महिना बाट सुरु हुने प्रतियोगिता कोरोर्ना [ कोभिड-१९] महामारी को दोस्रो लहर को प्रकोप ले गर्दा एक वर्ष पछाडि सार्ने निर्णय गरिएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि कोभिड–१९ को प्रकोप सकिएको छैन र दोस्रो लहर चलिरहेको छ । त्यसैले यसको प्रभाव कुनै न कुनै रूपमा रहने अड्कल काटिएको छ ।
यो विश्व फुटबलको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता हो । चोटग्रस्त क्रिस्टियानो रोनाल्डोबिनाको पोर्चुगलले उपाधि चुमेको ५ वर्षपछि र फ्रान्सले रुसमा विश्वकप जितेको तीन वर्षपछि हुन लागेको हो । प्रतियोगितामा सहभागी २४ देशमध्ये उपाधि दाबेदार टिमको पनि कुनै कमी छैन र यसमध्ये फ्रान्स सबैभन्दा अगाडि छ । फ्रान्स चाहन्छ, सन् १९९८ मा विश्वकप जितेर युरो २००० जितेजस्तै यसपल्ट यस्तै सफलता दोहोर्‍याउन सकियोस् ।
प्रतियोगिता भने यसपटक केही फरक देखिने छ  । किनभने यो युरोपका फरक ११ देशका ११ फरक सहरमा खेलहरू हुनेछन् । फेरि यो योजना पनि अरू कसैको होइन, युरोपेली फुटबल महासंघका पूर्वअध्यक्ष मिचेल प्लाटिनीको हो । सुरुमा यो प्रतियोगिता १३ सहरमा हुने निर्णय थियो तर कोरोनाको दोस्रो लहरबीच ब्रसेल्स र डब्लिन सहरलाई खेल आयोजनाबाट वञ्चित गरियो । फेरि बिलबाओको स्थान सेभियाले लियो भने डब्लिनमा हुने भनिएको खेल लन्डन र सेन्ट पिटर्सबर्गमा हुने तय भएको छ । आयोजनाका थप सहर रहेका छन्, एम्स्ट्रडम, बाकु, बुखारेस्ट, बुडापेस्ट, कोपेनहेगन, ग्लास्गो, लन्डन, म्युनिक र रोम । यी सबै सहरले कम्तीमा २५ देखि शतप्रतिशतसम्म दर्शक प्रवेशको जिम्मा लिएको छ । म्युनिकले भने एलिनाज एरिनामा हुने खेलमा १४ हजार ५ सय दर्शक छिराउने भनिसकेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष एलेक्जान्डर सेफेरिन मान्छन्, युरो २०२० सफलमात्र होइन, सुरक्षित पनि हुनेछ । उनले भनेका ( यो यस्तो फुटबल प्रतियोगिता हो, जसको मद्दतबाट युरोपले बाँकी विश्वलाई भन्न सकोस्, युरोप जीवन्त छ र यहाँ खुसियाली चलिरहेको छ । युरोप फेरि लयमा फर्केको छ ।
Previous articleमहामारी को समयमा काम नपाउदा भारतमा ‘अभिनेत्री बने यौनकर्मी’!
Next article४९ जनाविरुद्ध २१ दिने सूचना जारी-‘ललिता निवास प्रकरणमा’ (सूचीसहित)
पुरानै प्रकार को बजेट लाइ निरन्तरता, बजेटमा कुनै पनि क्रमभंगता देखिँदैन – डा. बाबुराम भट्टराई